🥇 ndekọ ego nke oche enyemaka
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 118
ndekọ ego nke oche enyemaka
Vidiyo nke ndekọ ego nke oche enyemaka
Nye iwu ndekọ ndekọ ego nke oche enyemaka
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, a na-ahazi usoro ndekọ ego enyemaka Desk site na mmemme akpaaka pụrụ iche, nke na-enye ụlọ ọrụ IT ohere ịrụ ọrụ nke ọma na arịrịọ na arịrịọ, na-enye enyemaka nke ọma, melite na ịzụlite ọrụ. Ọ bụghị ọrụ ọ bụla ka edobere ka ọ na-ahụ maka ịgbakọ ego naanị, ka ụfọdụ obere okwu ghara ịdọpụ uche gị, gbanwee n'etiti usoro enyemaka Desk, chọta ngwọta kachasị mma ozugbo, ma ghara ibufe ndị ọrụ ọrụ na-enweghị isi.
Advanced Help Desk Teknụzụ sitere na USU Software system (usu.kz) amụwo nke ọma iji ghọta ụlọ ọrụ ahụ, mara maka usoro na ụkpụrụ kachasị ọhụrụ, wee mepụta ngwaahịa kwesịrị ekwesị nke na-apụta n'ezie dị irè ma na-arụpụta ihe na omume. Ọ bụghị ihe nzuzo ebumnuche nke ikpo okwu ejedebeghị na ndekọ ego na-arụ ọrụ. Ọ bụkwa ya na-ahụ maka okwu nkwurịta okwu, na-enyocha ọnọdụ nke ego ihe onwunwe, na-emepụta tebụl ọrụ nke nhazi ahụ, na-akwadebe akụkọ na-akpaghị aka na ụkpụrụ ọ bụla. Ndekọ Desk Enyemaka nwere ozi bụ isi maka arịrịọ na ndị ahịa. Ozi ndekọ ego dị mfe igosipụta na enyo, gbanwee ozi na ndị ọrụ ndị ọzọ, na zipu akụkọ na akwụkwọ. Ọ dịghị mkpa iji mmemme ndị ọzọ. Ọ bụrụ na iburu n'uche, enwere nsogbu ọ bụla, ndị ọrụ anaghị ezute oge a kara aka, ọ dịghị ihe dị mkpa iji dozie nsogbu ahụ, mgbe ahụ, ndị ọrụ ga-abụ ndị mbụ mara banyere ya. O zuru ezu iji mee ka modul ngosi nke arụnyere arụ ọrụ ma ị nwere ike ijide aka gị n'enweghị nsogbu na pulse nke njikwa. A na-egosipụta usoro ọrụ Desk enyemaka ozugbo. A na-emelite ozi ndekọ ego nke ọma. N'ihi ya, ndị ọrụ nwere ike ịza arịrịọ na ọsọ ọkụ, mee mgbanwe, mụọ akụkọ nyocha kachasị ọhụrụ wee mee mkpebi nchịkwa. A na-emechikwa okwu nkwurịta okwu ndị ahịa nke ọma site na iji nhazi Desk Help. Ọ dị mfe ịgbanwe data ndekọ ego site na modul ozi SMS, kọọ nsonaazụ ọrụ kachasị ọhụrụ, kọọ akụkọ, nye ọrụ, kpọsaa ọrụ otu. Ka oge na-aga, nhazi Desk enyemaka aghọwo ihe a na-apụghị dochie anya ya. A na-eji ha na-arụsi ọrụ ike site n'idu ụlọ ọrụ IT iji mee ka nlekọta nke ndekọ ọrụ dị mma, wepụ obere ihe puru omume nke njehie na ezighi ezi, na iwebata njikwa ọhụrụ na ngwaọrụ nhazi. Akpaaka yiri ka ọ bụ ihe ngwọta kachasị mma iji bulie paramita nke ihe owuwu ahụ, na-ewepụ ndị ọrụ n'ọrụ kwa ụbọchị, na ịghara igbu oge ọzọ na usoro nkịtị. Ihe oru ngo a na-etolite n'ike. Ihe mgbakwunye akwụ ụgwọ dị. A na-ebipụta ndepụta kwekọrọ na webụsaịtị.
Usoro enyemaka Desk na-enyocha ọnọdụ ọrụ na nkwado teknụzụ, na-ahụ maka ozi na arịrịọ mbata, oge imecha, ma mechie nkwurịta okwu na ndị ahịa. Idokwa ndekọ ọrụ na-adị mfe karị mgbe akwụkwọ ndekọ aha na katalọgụ dị mkpa dị nso. Ọ ga-ekwe omume idowe ebe nchekwa dijitalụ. Oge ntinye akwụkwọ mkpesa ọhụrụ belatara nke ukwuu. Usoro ngwa bụ akpaaka zuru oke. Ị nwere ike ịdabere na onye na-eme atụmatụ arụnyere maka ihe ọ bụla metụtara ndị ọrụ, nzute oge njedebe, na atụmatụ nhazi.
Emebere nhazi nke Desk Enyemaka na-emesi ike na nkasi obi nke iji kwa ụbọchị. N'otu oge ahụ, mmemme ahụ anaghị ebute ihe ndị pụrụ iche chọrọ n'ihe gbasara ogo mmụta kọmputa, nkà, ma ọ bụ ahụmahụ.
Ọ bụrụ na achọrọ akụrụngwa ndị ọzọ ngwa ngwa maka ụfọdụ ọrụ, mgbe ahụ, ozi ndekọ ego a na-egosipụta ozugbo na ihuenyo. Ndị ọrụ ga-abụ ndị mbụ mara banyere ya.
Ọrụ ọrụ gụnyere ọtụtụ usoro, nke ọ bụla n'ime ha na-achịkwa ọgụgụ isi. Enyere ohere ka ị na-akpakọrịta na ndị ahịa site na SMS-mailing ọtụtụ. Site na ikpo okwu Desk Enyemaka, ọ dị mfe karịa mgbe ọ bụla ịgbanwe ozi na arịrịọ anatara, ziga ibe gị akwụkwọ, eserese, akụkọ na ozi ndị ọzọ. A na-egosipụta data ndekọ ndekọ ọnụ ahịa metrik arụmọrụ arụrụ arụ, nke na-enyere aka ịchọpụta nsogbu ndị pere mpe ngwa ngwa ma mee mgbanwe n'ụzọ doro anya. Enyere ndị ọrụ mara banyere ihe omume ugbu a nke nzukọ ahụ na modul dijitalụ kwekọrọ.
Elegharala ikike ijikọ na ọrụ na ọrụ dị elu. A na-ebipụta ndepụta ahụ na webụsaịtị. Ọtụtụ ụlọ ọrụ IT, ndị ọchụnta ego n'otu n'otu, ebe ọrụ, na ndị otu gọọmentị na-ejere ọha mmadụ ozi enwetala mmemme ahụ. Ọ bụghị ihe niile achọtara ebe na nhazi ntọala. A na-ewepụta nhọrọ ụfọdụ iche iche. Anyị na-akwado ka ị mara onwe gị na njirimara arụ ọrụ. Malite n'ule ka ịmata ngwaahịa a nke ọma, chọpụta ike ya, wee jiri nlezianya tụlee uru na ọghọm ya. Taa, ọtụtụ òtù na-eche nsogbu dị ngwa ihu ihu, nke gụnyere mkpa iji belata ọnụ ahịa yana nkwalite mgbe niile nke àgwà ngwaahịa na ọrụ ndị a na-enye. N'ọnọdụ akụ na ụba ugbu a na mmụba nke asọmpi n'etiti ụlọ ọrụ, mkpa ọ dị iji belata ụgwọ ma ọ bụ ọnụ ahịa mmepụta ihe aghọwo naanị ọrụ siri ike karị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, mkpa nke njikarịcha usoro dị mkpa iji melite arụmọrụ nke ụlọ ọrụ na òtù dị iche iche, na-eburu n'uche ntinye aka dị ala nke ndị nwe ụlọ ahịa n'ihe gbasara ịkwalite usoro azụmahịa. Enyemaka Desk aza ajụjụ na-abịa napụta.
Akụrụngwa akpaaka Helpdesk
ngwa maka oche enyemaka
akpaaka nke oche enyemaka
Akpaaka nke arịrịọ nhazi na ọrụ nkwado teknụzụ
Zụrụ oche ọrụ
Njikwa oche enyemaka
Desktọpụ enyemaka efu
Mmemme oche enyemaka efu
Desktọpụ ọrụ efu
Sistemụ efu maka tebụl enyemaka
Nbudata oche enyemaka
Mmejuputa oche enyemaka
Mmemme oche enyemaka
Sistemụ tebụl enyemaka
Nlekọta nke oche enyemaka
Nkwalite nkwado teknụzụ
Mmemme maka nkwado teknụzụ
Mmemme maka ọrụ nkwado teknụzụ
Ogo nke ọrụ nkwado teknụzụ
akpaaka oche ọrụ
Ọnụ oche ọrụ
Budata tebụl ọrụ
Mmejuputa oche ọrụ
Nlekọta oche ọrụ
Nzukọ oche ọrụ
Sistemụ tebụl ọrụ
Ngwanrọ maka nkwado teknụzụ
Sistemu maka ndebanye aha arịrịọ maka nkwado teknụzụ
Sistemụ arịrịọ maka nkwado teknụzụ
Sistemụ maka nkwado teknụzụ
Sistemu maka nkwado teknụzụ nke ndị ọrụ
Sistemu maka ọrụ nkwado teknụzụ
Nkwado nka na ụzụ akpaaka
Akpaaka ọrụ nkwado nka
Nlekọta ọrụ nkwado teknụzụ
Nka na ụzụ nkwado ọrụ akpaaka